HomeAfaan OromooOduu Gara Garaa, Waxabajjii 9, 2020
Dhiigni ilmaan Oromoo biyya kanatti dhiiga saree ta’e jira.
Guyyaa har’aa waraanni Bilxiginnaan ummata keenya irratti bobbaaste obboleessa keenya saadiq Haaji Ibroo jedhamu halkana keessa Sa’a 7 Konkoolata issa Isuzu Obama jedhamu osso konkolaachisa jiru godina Baalee aanaa Diinshootti duubaa fi duraan xiyyitii itti roobsuun ajjeestee jirti. Namoota waliin jiran lamas eessa akka jiran hanga ammaatti wanti beekamee hin jiru.
Sababa kanaa ummanni dheekkame gad baheera Poolisin Haaran Qeerroo uleen cafaqaaru heddus hidhaaru, hidhaan waajira Poolisi keessatti osso hin taane kaampi jara keessatti akka tahes dhageenyera, Qeerroo huccuu isaani dhiqsiisa akka jaran Itti dhaqabneera. Dargagoon Abdulaziiz Jedhamuu haalan reebame du’aaf jireenya gidduu jira.
Duuti nurraa hafaa hin jirtu.Takka takkaan manatti dhufanii nu fixuu irraa bakka tokkotti baanee isaanin falmaa du’uu nuuf wayya.
Maqaan isaa Baayyisa Disaasaa Safaraa jedhama.
Anaa Jaldu Ganda Cobii Gubbaa sirbaa jedhamutti dhalatee Guddate. Qeerroon kun akka aadaa naannoo sanaatti fardaan tabachaa hiriyoota isaa waliin gugsee dorgomaa guddate. Qeerroon kun Barumsa isaa mana barumsaa ola aanaa irraa xumuree hojii hin argannee turee warra isaa bira yeroo gabaabaaf turuun dirqamee otoo jiruu ብልጵግና balaa hamaa akkanaa irraan geese. Raayyaan Ittisa biyyaa jedhamtu kan Mootummaa Gantuu kanaa Halkan da’eeffatanii mana Abbaa isa seenuun maatii hundumaa hunkuranii maatii isaa nama afur waliin rasaasaan rukutan. Hundumti isaanii miidhaa hamaan irra ga’ee mana yaalaa keessaa dhiphachaa akka jiran oduun dhaga’ame. Ol adeemaan kun otoo Millaa isaalamaaniin f fiigee hin quufiin
ብልጵግና milla isaa irraa kuttee. Baradheen nama ta’ee Maatii koo fii biyyaa koon tajaajila jedhee karooraa fii Hawwii fii abjuu isaa jalaa gabaabsite. Baayyee nama dhukkuba.Mootummaan dhaabbatee hafee hin jiru. Yoo Motummaa Waaqayyoo malee. Waaqayyoo jalloota ni buqisa kun waan hin hafnedha. Garuu Oladeemaa keenya warri Naafeessitanii ambistan isnis naaffachuuf yeroon keessan dhumeera. Uummanni kana otoo harguu hin callisu Guuyyaa eega male. Kana ilaaluun Baayyee Nama dhukkuba!!